Nyefee nke Music si ochie iPod ka iphone nwere ike na ụzọ abụọ. Nọmalị ndị mmadụ, nwere ike ihe echiche na-nyefe usoro nke music si ha ochie iPod ka Computer na mbụ, na mgbe nyefee ha si Computer ha iphones. Ma, nke a nwere nsogbu na itunes adịghị ekwe ka onye syncing nke ios ngwaọrụ na kọmputa; Otú ọ dị ya na-enye ohere agbara usoro. N'ihi ya, ndị na-esonụ ndị dị mkpa maka ihe ịga nke ọma nyefe nke Music si ochie iphone ka iphone.
• niile ị chọrọ na mbụ laa bụ nwụnye nke itunes na kọmputa gị.
• Nkwụnye gị ochie iPod n'ime kọmputa gị
• Ke iTunes, pịa File na mgbe ahụ mmekọrịta
• Mgbe nke ahụ na-agwụ agwụ, pịa File na Nyefee ịzụrụ
• idaputa na ịkwụpụ gị iPod
• ikwunye na gị iPhone
• Gaanụ n'ime gị iTunes n'ọbá akwụkwọ., Ebe gị niile music na-echekwara
• ịdọrọ music ị chọrọ jidesie gị iPhone
• Usoro a na-eme
Otú nyefee mfe music n'etiti iOS ngwaọrụ ma ọ bụ n'etiti iOS ngwaọrụ na kọmputa?
A Ebube ngwa n'ihi nzube nke Nyefee nke music si iphone na kọmputa ya bụ 'Wondershare TunesGo', bụ oké ụzọ, nke nwere ike ga-eji maka dị iche iche ngwọta. Ọ na-eje ozi nzube nke nyefe nke music si iphone ka MAC Nyefee, iphone ka PC Nyefee, iOS ka iTunes Nyefee, iOS ka Computer Nyefee na Android ka Computer Nyefee. A na ngwa nwere ike ji mee ka a magburu onwe ndabere niile music si gị iphones na ngwaọrụ ndị ọzọ gị PC.
Ntak-ahọrọ Wondershare TunesGo?
Ebe ọ bụ na, usoro nke zuru ezu transfer dị nnọọ mfe na-arụ ọrụ kwa ngwa ngwa, ndị Wondershare TunesGo, bụ oké ngwa n'ihi nzube na guzo dị ka ndị kasị mma n'etiti ọtụtụ dị na ahịa. Nke a bụ ihe magburu onwe ngwá ọrụ maka nzube nke kpọmkwem nyefe gị media faịlụ site ọ bụla iPod ka iphone na-enweghị mkpa nke itunes.
E nwere ọtụtụ uru n'ihi na oke nke Wondershare TunesGo, otu nke praịm ndị dị ka ndị:
• Free ndụ Upgrades
• Wondershare TunesGo òkè iTunes Playlist na One-click
• Ọ na-jikwaa Music enweghị ihe ọ bụla iTunes Mmachibido
• TunesGo na-akpaghị aka nyochara na ọcha elu music n'ọbá akwụkwọ na otu click
• Ọ na-mgbari mgbochi nke iTunes na-ahapụ Androiders eji iTunes dị nnọọ ka ihe iOS ngwaọrụ.
• Download na ndekọ music si YouTube ma ọ bụ ndị ọzọ music saịtị
Nzọụkwụ iji Wondershare TunesGo
Ebe a, anyị ga-atụle nzọụkwụ on otú iji Wondershare TunesGo. Tranferring music si iphone ka Computer nwere ike ga-agwụ agwụ ndị a na-esonụ nzọụkwụ.
• Pịa na Nyefee Music Option, tinye Nyefee Music peeji mgbe ngwaọrụ (Lee, iphone) jikọọ
• Lelee niile ndị listi ọkpụkpọ ma ọ bụ songs mbupụ ka iTunes, pịa Export na mgbe ahụ mbupụ Computer ma ọ bụ Mac.
• The snapshot n'okpuru na-egosi nzọụkwụ
Wondershare TunesGo nwere ike mezue ihe E wezụga nke a nyefe nke faịlụ site na iphone ka Computer. Ọ nwekwara ike ịdọrọ na dobe Music si PC na Mac / iTunes ka Ngwaọrụ. Nzọụkwụ na-kọwara n'okpuru:
• Pịa na Nyefee Music, tinye Nyefee Music peeji mgbe ngwaọrụ jikọọ
• Họrọ music si PC ma ọ bụ Mac ma ọ bụ iTunes, ikpuru & idebe na ngwaọrụ ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ
• The snapshots-kwuru n'okpuru maka otu
Tinyere na abụọ ndị a n'elu ọrụ, Wondershare TunesGo nwere ike tinye n'ọrụ maka nzube nke wughachi iTunes Library, Nyefee Music si iTunes ka Ngwaọrụ, Nyefee Music si PC ka Ngwaọrụ, Nyefee Music, Playlist site na Ngwaọrụ ka iTunes, Nyefee Music na site na Ngwaọrụ ka PC ma ọ bụ Mac, Mee Ndi an-kpọ Path maka Files kpọfere iTunes, Set Mpụga SD Kaadị dị ka ndabere mmekọrịta Path maka Files kpọfere Android, ka ndabara mmekọrịta Path maka Files kpọfere Android, Kwado Ijikọ, Toggling n'ihi na otutu Devices na ọtụtụ ndị ọzọ.
> Resource> iPad> otú nyefee music si ochie iPod ka iphone / iPad